धेरै मण्डलीहरु एकतामा आउन थालेका छन् ,- डीआर थुलुङ | Nepali Christians
धेरै मण्डलीहरु एकतामा आउन थालेका छन् ,- डीआर थुलुङ
July 2, 2014 12:47 pm by: Nepali Christians Category: Interviews A+ / A-
डीआर थुलुङ उमेरले ८५ वर्षको नेपाली ख्रीष्टीयन मण्डलीहरुका लागि एक दरिलो खम्बाहु नुहुन्छ । आख्रीष्टीयन जीवन जिउने अधिकाश जनहरुलाई सुसमाचार गरी उनीहरुको आत्मा रक्षाकालागि जीवन समर्पण गर्नुभयो ।
आफूलाई एक असल प्रभुको दासको प्रमाणित गर्नु भएका डीआर थुलुङसाग पवित्र दर्शन पत्रिकाका सहसम्पादक श्वेता राईले उहाको निवास धरानमा डिसेम्बर १३ तारिखका दिन बिहान कुराकानी गर्नु भएको थियो । सोही कुराकानीको केही अंश यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रश्न: प्रेरित बाबा हिजोआज दिनहरु कसरी बितिरहेको छ ?
उत्तर: नेपालको ७५ वटै जिल्लाहरुमा रहेको मण्डलीहरुमा गएर त्यहाका मानिसहरुलाई शिक्षा दिादै परमेश्वरको काममा मेरो दिनचर्या बितिरहेको छ ।
प्रश्न: आफ्नो जीवनको अधिकांश समय परमेश्वरको काममा लगाउनु भयो र अहिले प्रेरितसम्म हुनुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
उत्तर: मैले धेरै दर्शनहरु पाइसकेको छु । पृथ्वीमा रहेर लोभ लालचा गर्नुभन्दा स्वर्गमा जाने प्रयत्न गर्नु र सबै मानिहरुलाई स्वर्ग लानु ठूलो कुरा हो । म सन् १९५३ सालमा बप्तिस्मा लिएदेखि परमेश्वरको महिमाको काममा लागिपरेको छु र यसैमा आनिन्दत छु ।
प्रश्न: नेपालका विभिन्न ठाउाहरुमा रहेका मण्डलीहरुको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
उत्तर: अहिलेसम्म म जति पनि नेपालका मण्डलीहरुमा पुगे, पहिलेको तुलनामा निकै सुधार आएको अवस्था छ । पहिले पहिले मण्डलीका पास्टर अगुवाहरुले बाइबल त्यति अध्ययन नगरेकाले बुझ्न सकेनन् र मण्डलीमा फुट पनि हुन्थियो तर अहिले धेरै मण्डलीहरु एकतामा आउन थालेको छन् ।
प्रश्न: प्रेरित बाबा, जीवनमा धेरै समय धरानमा बिताउनु भयो, धरानलाई आधार क्षेत्र मानेर परमेश्वरको काममा लाग्नु भयो, यहाको अवस्था चाहि कस्तो छ नी ?
उत्तर: धरानका मण्डलीहरु पनि सुरक्षित छन् । सबै मण्डलीहरु ठिकै छन् । केही मण्डलीहरु बाइबल तालिम गरेर अघि बढी रहेका छन् । केहीमा आफै अध्ययन गरेर भए पनि परमेश्वरको काम गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म ठिकै नै छ ।
प्रश्न: प्रेरित बाबा, पहिलेको पञ्चायती शासन व्यवस्था देख्नु भो, भोग्नु भो अनि अहिले नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
उत्तर: पहिले पञ्चायती कालमा विश्वासीहरुलाई निकै सतावटहरु आउथ्यो । विश्वासीहको घरमा ढुङ्गा मुढा आउथ्यो । पुलिसले घर घेरा लाउथ्यो । विश्वासीहरुले कुनै नोकरी पाउादैन थिए एकदमै कठिन थियो तर अहिले राज्यले धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेपछि उत्साह आएको छ । व्यवहारिक अवस्था आइसकेको छ ।
प्रश्न: धर्म निरपेक्ष हुनुअघि पंचायतकालको एकदलीय शासन व्यवस्था, एक धर्मको व्यवस्थामा तपाईले भोग्नु भएको दु:खको क्षणहरु सम्झनु पर्दा नी ?
उत्तर: सतावट दु:ख नभएसम्म असल रुपमा परमेश्वरको जन हुन नसकिने रहेछ । जसरी साना कलिला विरुवाहरु आाधिवेहरीमा माटामो लत्रिन्छ, हल्लिन्छ र कैयौं संघर्ष पछि बलियो फल दिने वृक्ष बन्छ । हामी मानिस पनि त्यस्तै रहेछौं । धेरै सतावट र संघर्ष पछि नै म पनि परमेश्वरको सु–समाचार प्रचार गर्ने काममा परिपक्क भए । म पहिले पुलिस देख्दा डराउथे तर जब मलाई पुलिसले पक्रेर कुटे, पिटे अनि २ पटकसम्म मारेर फाली दिए, एकपटक बसाहमा ३ घण्टा पछि म बिउाझे, त्यस्तै अर्को पटक दिक्तेलको थानामा १२ घंटा पछि मेरो होश आयो । यिनै कारणले येशूको काखमा पुगे र स्वर्ग कस्तो हुादो रहेछ मैले थाहा पाए । त्यसै कारण पहिलेको सतावट सम्झिन्दा आजभोली धेरै सुख र आनन्द महशुष गर्छु ।
प्रश्न: परमेश्वरको कामकानिम्ति सबै समय समर्पण गर्नु भएको छ साथमा धेरै राम्रो पेन्टिङहरु गर्नुहुादो रहेछ । प्रेरित बाबा, तपाईलाई जीवन के हो जस्तो लागिरहेको छ ?
उत्तर: यो जीवन हाम्रो होइन । हाम्रो जीवनमा सबै घटनाहरु, कामहरु परमेश्वरको योजना हो । परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ सबै ठिकै छ । म खुशी छु ।
प्रश्न: अन्त्यमा देश तथा विदेशमा बस्नु भएका परमेश्वरका जन तथा आफन्तहरुलाई क्रिसमसको शुभकामना कसरी दिनुहुन्छ ?
उत्तर: यो विश्वासीजनहरुमा एउटा राम्रो सुअवसर हो । सबैले आआफ्ना ठाउाबाट परमेश्वरको प्रचारप्रशार गर्दै छरछिमेकी आफन्त जन सबै भेट भएर येशू ख्रीष्टको जन्मदिन क्रिष्टमस बडो धुमधामले मनाउन हुन म देश तथा विदेशमा बस्नु हुने सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरुलाई शुभकामना दिन चाहान्छु । हेप्पी क्रिसमस –
मासिक पत्रिक , पवित्र दर्शन
धेरै मण्डलीहरु एकतामा आउन थालेका छन् ,- डीआर थुलुङ Reviewed by Nepali Christians on Jul 02 . डीआर थुलुङ उमेरले ८५ वर्षको नेपाली ख्रीष्टीयन मण्डलीहरुका लागि एक दरिलो खम्बाहु नुहुन्छ । आख्रीष्टीयन जीवन जिउने अधिकाश जनहरुलाई सुसमाचार गरी उनीहरुको आत्मा रक् डीआर थुलुङ उमेरले ८५ वर्षको नेपाली ख्रीष्टीयन मण्डलीहरुका लागि एक दरिलो खम्बाहु नुहुन्छ । आख्रीष्टीयन जीवन जिउने अधिकाश जनहरुलाई सुसमाचार गरी उनीहरुको आत्मा रक् Rating: 0
नेपाली भाषामा बाईबल छाप्ने पहिलो व्...बिरामी हुँदा एक्लो महशुस हुन्छः श्र...